Intay la egtahay awoodda Milatari ee Kuuriyada Waqooyi? - BBC News Somali
Intay la egtahay awoodda Milatari ee Kuuriyada Waqooyi?
Image caption Air Force B-1B
Waxaas oo dagaal ah oo Maraykanka lala galo loona malaynayo in waxa kali ah ee laga faa'iidi karo uu yahay in uu soo afjaro xukuumadda wax macno ah ma samaynayso.
Dagaal kasta oo ka dhaca gacanka wuxuu faa'iido u noqon doonaa Washington.
Lix arrimood oo laga bartay muuqaalka askerigii ka baxsaday K/Waqooyi
Daawo: Dhakhaatiir ay ka dhex tafatay ayagoo qalliin ku jira